LIFAAQA Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad Ku-lifaaqan
BONOVO mishiinka mashiinka wax lagu nadiifiyo ee la taaban karo ee lagu hagaajin karo dhulka
Bonovo Haydarooliga Gawaarida Gawaarida ayaa loo adeegsadaa burburin kontorool ah oo shub ah iyo shubka la xoojiyay oo leh saxnaan, xoog, buuq iyo gariir ka yar aaladaha saamaynta. Waxay wax ku ool u yihiin aasaaska, darbiyada iyo alwaaxa. Waxay u baahan yihiin il awood koronto oo hooseysa ama matoor si ay u shaqeeyaan.
BONOVO OEM adeegga mashiinka waxsoosaarka la taaban karo ee farsamada ee ku lifaaqan ganacsiga
Bonovo Mechanical Concrete Pulverizers waxay si fudud u burburinaysaa iyada oo loo marayo shubka la xoojiyay oo la jaray dhismayaasha birta fudud ee u oggolaanaya in wax la kala saaro oo dib loo warshadeeyo, isla mar ahaantaana, waxay oggoshahay in si fudud loo isticmaalo qalabka. iyo birta, saqafka, tiirarka, jaranjarooyinka iyo qayb kasta oo la taaban karo.
BONOVO heerka sare ee xirmooyinka ilaalinta saxanka astaanta compactors
Bonovo Plate Compactor waxaa loo isticmaalaa in lagu cadaadiyo noocyada carrada iyo quruurux ee mashaariicda dhismaha oo u baahan degel hoose. Wuxuu si wax ku ool ah ugu shaqeyn karaa meel kasta oo qoditaankaaga ama kororkaaga dambe uu gaari karo: godad, dusha sare iyo hareeraha, ama xagga sare ee dusha iyo xaashida. Waxay ka shaqeyn kartaa aasaaska agtiisa, hareeraha xannibaadaha, iyo xitaa meelaha dhaadheer ama dhul qallafsan oo rolleyaasha caadiga ah iyo mashiinnada kale aysan shaqeyn karin ama ay khatar ku tahay isku dayga. Xaqiiqdii, Bonovo taarikada wadayaasha / darawallada waxay ka ilaalin karaan shaqaalaha dherer buuxa oo ka yimaada isugeynta ama ficilka wadista, hubinta shaqaaluhu inay ka fog yihiin qatarta godadka ama xiriirka qalabka.
BONOVO xirmada u adkaysta CW SERIES qoditaanka baaldi ee qodista
BONOVO waxay u fidisaa qadka baaldi dhameystiran qodista. Khadkan biinanka iyo Fiilooyinka loogu talagalay CW Coupler baaldiyo ayaa leh nashqado la hagaajiyay si looga faa'iideysto awoodda buuxda ee mashiinka kororka.
BONOVO customizable S SERIES baaldi godka mashruuca qodista
Dhammaan noocyada baaldiyo ee Bonovo ee la heli karo.
Bonovo waxay haysaa baaldiyo kaladuwan oo buuxa iyo lifaaqyo leh "S" qaansooyin nooca hadda ah.